Sandals Foundation na-etinye ego na Community Youth Center
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Sandals Foundation na-etinye ego na Community Youth Center
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Egwuregwu • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Egwuregwu basketball na ọtụtụ ebumnuche na-egwu egwuregwu na Buckfield Playfield, nke dị n'etiti Ocho Rios na Jamaica, anatawo nnukwu mmezi na mmezigharị iji nyere ndị bi n'ofe parish nke St. Ann aka. Gbaso ihe dị ka US $ 50,000 itinye ego na Akpụkpọ ụkwụ Sandals, etiti dị mma karịa mgbe ọ bụla.
Ebe a abụwo ebe dị nchebe maka ndị ntorobịa iji nọrọ oge ha na ebe bụ isi maka ịnabata egwuregwu enyi na enyi, asọmpi egwuregwu, na mmemme ntụrụndụ. Lọ ọrụ a kwalitere ugbu a nwere basketball ọzọ na ụlọ ikpe nwere ọtụtụ ihe nwere netball, ihe ọhụụ ọhụụ emere ọhụrụ, wụnye ọkụ iji melite ihe omume abalị na nchekwa, ịgba, yana ọfụma mara mma iji mee ka oghere dịkwuo mma.
Onye isi oru na Sandals Foundation, Karen Zacca, kwuru na oru ngo a bidoro na 2019 ma obu oru nke ihunanya nke kwekorita na ntinye aka nke ndi Foundation na mmepe ndi ntorobịa site na egwuregwu.
“Oghere ndị na-agba ume ka egwuregwu na-eme ka ndị bi ebe na-egwuri egwu, na-eme ka ha na ibe ha na-emekọrịta ihe, na-eme ka nkà ha dịrị ogologo ndụ, na-emekwa ka obodo nwee ahụ́ ike. N'èzí onye ọ bụla n'ezinụlọ anyị, obodo anyị na-enye aka inye anyị echiche nke ịbụ ndị nwe, na Sandals Foundation ga-enye nnukwu ihe dị mkpa mgbe niile maka ịmepụta oghere dị mma maka obodo anyị iji nwee ọganihu. "
Onye na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze na Sandals Ocho Rios Resort, Lyndsay Isaacs, onye chịkọtara lọjistik kwuru na ndị otu ahụ gbara mbọ were ọrụ nka nke ndị ọrụ ngo na ndị ọrụ ime obodo rụkwaa nrụzigharị ahụ.
“Ihe oru ndi na-aruru ndi mmadu agha kwesiri iburu oru nke ndi obodo. Dị ka o kwere mee, Ntọala ahụ na-eme ka ndị ọkachamara nọ n'ógbè ahụ nwee mmetụta nke inwe na usoro mmepe ahụ yana iji kwado ọrụ ndị ọrụ. ”
Ọtụtụ ndị na-ese ihe osise ahụ, nke etinyere n'ụzọ dị egwu n'ofe egwuregwu ahụ, bụ onye omenkà obodo Zara na-ese ma ndị ọbịa Sandals Resorts na-ese ya na ndị otu egwuregwu ndị wepụtara onwe ha n'oge mmemme ọhaneze tupu mmalite nke coronavirus.
“Nke a bụ ihe gbasara ezinụlọ maka anyị, na Sandals Foundation bụ ụgbọala nke ndị ọbịa anyị, ndị otu anyị, ndị ọrụ njem, na ndị mmekọ anyị na-enweta ohere iji jeere obodo ndị anyị na-arụ ọrụ. Obi dị m ezigbo ụtọ na ihe si na ọrụ a pụta, obi abụọ adịghị ya na ndị St. Ann ga-eji ya nke ọma. ”
Ocho Rios bi na nkata, Dehalo Sappleton, na-ekwu na ụlọ ikpe ndị a rụzigharị ga-enyere ndị otu mpaghara aka ị nweta ọnya ha n'ala ha.
“Enwere ụdị onyinye a dị ukwuu, anyị ga-emesokwa ya dị ka nke anyị. Fọdụ ndị nkata nwere ọgụgụ isi sitere na Ocho Rios, anyị na-agakarị Kingston na Montego Bay ịme aha anyị. Courtlọ ikpe a arụzigharịrị na-enye anyị ohere ugbu a ịkpọ aha anyị n'obodo anyị. ”
Na, Kurt Dale, onye na-ahụ maka egwuregwu maka parish nke St. Ann na Institute of Sports, na-ekwu na ụlọ ọrụ ndị a rụzigharị ga-enyere ndị na-eme egwuregwu aka ịmalite ịzụlite nkà ha ma zụlite ọkwa isonye na egwuregwu ahụ.
“Anyị chọpụtara na ihe ruru mmadụ iri ise n’achọghị ịgbatịkwu aka ha n’ netball, maka na ha enweghị ụlọ ọrụ egwu. Ọtụtụ n'ime ụmụ agbọghọ ndị ahụ ga-eme ogologo njem iji wee nwee ike igwuri egwu, mana ọ bụrụ na ụlọ ikpe dị ka nke a dị mfe, ọ ga-adịrị ha mfe ịpụ na isonye. ”